Ịchọghị ngwa iji Omegle na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba!Webụsaịtị na-arụ ọrụ nke ọma na mkpanaka.
Zute ndị bịara abịa na mmasị gị!
Omegle(oh meg ull)bụ nnukwu ụzọ iji zute ndị enyi ọhụrụ, ọbụlagodi mgbe ị na-eme ndọpụ uche mmadụ.Mgbe ị na-eji Omegle, a na-ejikọta gị na onye ọzọ ka ị na-ekwurịta otu na otu.Ọ bụrụ na-amasị gị, ị nwere ike ịgbakwunye mmasị gị, a ga-ejikọta gị na onye ahọrọla ụfọdụ mmasị.
Iji nyere gị aka ịnọ na nchekwa, nkata enweghị aha ọ gwụla ma ị gwa onye ị bụ (anaghị atụ aro ya!), ma ị nwere ike ịkwụsị nkata n'oge ọ bụla.Hụ Usoro Ọrụ na Ntuziaka Ogbe anyị maka ozi ndị ọzọ gbasara ihe eme na adịghị eme na iji Omegle.Omegle video nkata bụ moderated ma ọ dịghị imeru ihe n'ókè zuru okè.Ndị ọrụ na-ahụ maka omume ha naanị mgbe ha na-eji Omegle.
Ị ga-abụrịrị 18+ ma ọ bụ 13+ nwere ikike na nlekọta nne na nna iji Omegle.Lee Usoro Ọrụ Omegle maka ozi ndị ọzọ.Nchedo njikwa nne na nna nwere ike inyere ndị nne na nna aka dị na azụmahịa ma ị nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na https://www.connectsafely.org/controls/ yana saịtị ndị ọzọ.
Biko hapụ Omegle na-aga onye okenye saịtị kama ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị na-achọ, na ị bụ 18 ma ọ bụ karịa.
Ọnụ, anyị ga-eme ya.Chekwaa nzikọrịta ozi n'ebe ọ bụla ịnọ
Obi dị anyị ụtọ inyere gị aka ka ị na-akpọtụrụ, na-ekwurịta okwu na kwupụta echiche gị ka ị nwee ike nwetakwuo ọnụ.Obi dị anyị ụtọ na ọtụtụ nde azụmaahịa, obere azụmaahịa na ndị mmadụ dị ka gị tụkwasara obi.
Wulite mmekọrịta azụmahịa siri ike, mee ka mmekorita sie ike, ma nwee ogbako ndị nwere HD vidiyo na ọdịyo maka ndị sonyere 1,000.
Megharịa ọnụ ụlọ nzukọ iji gboo mkpa ndị ọrụ na-agbanwe agbanwe yana ụlọ ọrụ nguzozi yana usoro ọrụ dịpụrụ adịpụ nwere HD vidiyo na ọdịyo, ikesa ọdịnaya ikuku, na bọọdụ ozi mmekọrịta.
Mee ka olu gị dị elu site na iji ngwọta ekwentị igwe ojii nke mba ụwa site na iji ụzọ oku echekwabara, kwụ n'ahịrị oku, SMS, ịkpọ oku na nnọkọ na ndị ọzọ.
Jiri ohere maka ịrụ ọrụ ụlọ n'ụlọ - nzụkọ vidiyo, oku ekwentị, bọọdụ ozi na nkọwa na ngwaọrụ mmekorita nkeonwe gị.
A na-etinye ngwọta nkata na akaụntụ ahụ ma na-eme ka usoro ọrụ dị mfe, na-eme ka arụpụta ọrụ dịkwuo mma, ma hụ na mmekorita dị n'etiti ndị ọrụ ma n'ime na n'èzí nzukọ.
Melite ma mee ka ahụmịhe mbugharị gị dị mfe site na ihe karịrị ngwa 1,000 na njikọta maka ịhazi oge, imekọ ihe ọnụ, mmụta, ndegharị, CRM na ndị ọzọ.
Zoom na-enye Webinars vidiyo yana ngwaahịa mmemme mbugharị kachasị ọhụrụ iji gboo mkpa mmemme mebere gị niile.Mepụta ahụmịhe mebere nke onye ọ bụla ga-ahụ n'anya.Bido taa site na iji mmemme mbugharị yana webinar vidiyo.
Jiri API anyị, SDKs, webhooks na ndị ọzọ iji wuo ngwa bara ụba, ntinye ahaziri onwe ya, yana ọrụ ọhụrụ na-emeju usoro ọrụ mbugharị dị adị.
Usoro ịntanetị na-akwado nkesa nke enwere ike ị nweta ego n'ụzọ dị mfe yana tụọ ndị na-ege ntị ọhụrụ.
Ngwa nkata vidiyo Random na-atọ ụtọ
Nabata na ChatSpin, ngwa nkata vidiyo na-eme ka ọ dị mfe izute ndị ọhụrụ n'ịntanetị.ChatSpin na-enye atụmatụ nkata vidiyo gụnyere ihe mkpuchi ihu, ihe nzacha nwoke na nwanyị na obodo, nkata nzuzo na ndị ọzọ.Soro ndị mmadụ na-akpakọrịta n'ụwa niile ozugbo.Mete ndị enyi ọhụrụ, chọta ụbọchị, gosi nkà gị, rịọ maka ndụmọdụ, kparịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ naanị soro onye ị na-agaraghị enwe mkparịta ụka vidiyo.Ọ bụ n'efu ma dị mfe ịmalite ịkparịta ụka vidiyo na inwe anụrị.Ị maghị onye ị ga-ezute ọzọ!
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka gị na ndị ọhụrụ jikọọ, nkata vidiyo na-enweghị usoro bụ ụzọ ị ga-esi gaa, ChatSpin bụkwa ụgbọ ga-ebuga gị ebe ahụ.Anyị ewepụtala ngwa anyị ka ị nweta ihe ị na-achọ — ụzọ isi jikọọ na ndị ọhụrụ.
Yabụ kedu ihe ị na-eche?Soro ndị mmadụ kparịta ụka ugbu a!
Atụmatụ nkata cam efu
Anyị ji ọrụ malite Chatspin—iji mee ka ọ dịrị gị mfe isoro ndị anyị na-amabughị malite mkparịta ụka na-enweghị usoro.
jigide.Nke ahụ abụghị akụkọ zuru oke.
Ụwa jikọtara ọnụ karị, ụwa ebe ị nwere ike ime ka gị na ndị ọzọ nwee ezigbo njikọ, ma mpaghara ma na mba ụwa, bụ ihe mere ka ndị otu anyị mepụta ngwa vidiyo anyị.Oku ọ bụla na-ebute ụwa nso, na-enyere anyị aka ịchọta ntị anyị ga-ege ntị, ma na-enye anyị ohere iji nyochaa echiche n'otu n'otu.
Chatspin na-eme ka ọ dịrị gị mfe isoro ndị mmadụ na-akpakọrịta nke dabara gị mma.Kwuo nke ọma ka ị ghara izute ndị ezigbo mmadụ.Ngwa nkata vidiyo na-enweghị usoro nke Chatspin bụ ọnụ ụzọ gị maka inwe mmetụta nke njikọ na ndị ọzọ, nso na nke dị anya.
Ihu na ihu, njirimara Nwepu vidiyo Tinder, na-apụta ugbu a n'ụwa niile
Tinder, ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị kachasị n'ụwa ugbu a maka ndị mmadụ ịchọta matches na jikọọ na ha, na-agbasa akụkụ ọzọ taa iji gbasaa oge ndị mmadụ na-etinye na ngwa ahụ, yana nkwukọrịta ha nwere ike inwe n'ime ya.
Ihu na ihu, ihe ntinye naanị nke Tinder bidoro na mbido afọ a nke na-eme ka ndị ọrụ na-akparịta ụka vidiyo na ibe ha na-enweghị ikerịta ozi nkeonwe na naanị mgbe ha na-eche ihu cam, na-agbasawanye ugbu a n'ụwa niile, ikekwe mmegharị n'oge na a. oge ọtụtụ mmadụ anaghị ezukọ n'onwe ha.
Tinder maara nke ọma akụkụ dị egwu nke ọrụ mmekọ nwoke na nwanyị, yabụ n'ụzọ doro anya ọ tụlere etu ọ bụghị ndị otu vidiyo ụlọ ọrụ mana ndị otu ntụkwasị obi na nchekwa ya wuru nke a.
Rory Kozoll, onye isi ntụkwasị obi na ngwaahịa nchekwa na Tinder kwuru, "Anyị nwere obi ụtọ ịkọrọ na njirimara ihu na ihu na-apụta na obodo anyị zuru ụwa ọnụ mgbe anyị nwetasịrị nzaghachi dị mma site n'aka ndị otu anyị nwetagoro ya n'oge."Nke a na-agbakwụnye na ndepụta anyị na-eto eto nke e lekwasịrị anya na nchekwa ndị otu n'oge njem ha na-akpa, dị ka nkwenye foto, Ebe nchekwa na teknụzụ nchọpụta ozi anyị.”
Ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike ịdị ka ụdị ihe pụrụ iche na-eme nke ọma n'oge ọtụtụ ndị na-elekwasị anya - n'ihi iwu gọọmentị, ma ọ bụ na ndụmọdụ sitere n'aka ndị ọkachamara ahụike, ma ọ bụ ha abụọ - na ndọpụ mmekọrịta ọha na eze na ịchịkọta na obere afụ mara amara.
Mana n'ezie ọ dị ka enwere ohere ebe a: ha na-aghọ ụzọ ndị mmadụ ga-esi jikọọ na izute onwe ha, n'oge a na-emechi ọtụtụ ụlọ mmanya na ebe nzukọ ọdịnala ndị ọzọ, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala na-achọpụta ọrụ nkịtị ha nwere oke. , ndị mmadụ agaghịkwa ahụ ibe ha nke ọma n’ihu ọha n’ihi ihe nile i nwere ike iche n’echiche.
Dịka ọmụmaatụ, Tinder, dị ka stats sitere na AppAnnie, ka na-aga n'ihu na ọkwa kachasị elu nke nbudata ngwa ụdị ndụ n'afọ a (ọ dị ugbu a na ọnụọgụ atọ na iOS na US).
Na njirimara nkata vidiyo na-emesi echiche nke iji ngwa ahụ ọ bụghị naanị ịhụ onye nọ ebe ahụ na onye ị nwere ike ijikọ, kama iso ndị ahụ kparịta ụka.
Ọzọ gbakwunyere ebe a bụ na ọ bụghị a zuru ezu free-maka-niile spamfest nke na-achọghị na-abịakwute gị, dị ka ha nwere ike na a mmanya.
Tinder kwuru na ekwesịrị ịbanye na akụkụ abụọ a na njirimara ahụ, na ị ga-emerịrịrịrị na akụkụ ngwa ahụ oge niile tupu enwee ike ịmalite mkparịta ụka.
Ma ọbụlagodi mgbe ahụ ị nwere ike họrọ ileghara mkparịta ụka vidiyo anya mgbe ha batara, dịka ị nwere ike ịkpọ oku ekwentị mgbe niile.
Ma, ọ bụrụ na ị na-enweta creepy ndị mmadụ na-agwa gị ihe na-ekwesịghị ekwesị ma na-akpọ gị nke ukwuu, na ị na-achọghị ịgbanwe atụmatụ nke kpam kpam, ị nwere ike ịkọrọ ndị mmadụ site na ịpịgharịa na profaịlụ ha na-eso "akụkọ" ntuziaka.
Tinder ejirila atụmatụ vidiyo na-egwu egwu ruo ọtụtụ afọ iji gbasaa ụzọ ndị mmadụ si emekọrịta na ngwa ahụ, vidiyo bụ otu n'ime ndị na-ewu ewu na itinye aka na ngwa ugbu a.
Ọ bụla ihe agwakọtara ọnụ nke nsonaazụ.Tinder Loops, ụzọ ọzọ nke igosipụta onwe gị, dị kemgbe 2022 ma ka na-aga n'ihu.Mgbalị ndị ọzọ dị ka ihe ngosi Swipe Night apocalyptic mmekọrịta vidiyo in-app echekwabara na Machị n'ihi Covid-19, n'agbanyeghị na nso nso a ọ dị ka ihe nkiri a na-atụgharị n'ahịa ndị ọzọ.
Callpy ga-ekwe ka ị ghọta na ọ ga-ekwe omumenkwurịta okwu na ndị ọbịa na saịtị gị.
Nke a ga-eme ka mmụba ahịa dịkwuo mma, meeka ngbanwe nke saịtị ahụ dịkwuo mma, ma na-abawanye nleta ugborougboro site na ndị ọbịa.
Mkparịta ụka efu
Ụbọchị 19 nke oku efu
Gaa na ihe nchọgharị ahụ
Nweta ngosi ụbọchị 19
Mkparịta ụka ederede
Nweta kọntaktị ndị ọbịa sitena isi mmalite mepere emepe!
Aha mbụ, aha ikpeazụ
Njikọ na ibemgbasa ozi ọhanetwọk
Ibe webụsaịtị gara
Enwere ike ibugo data onye ọrụ hapụrụ na CRMma bulitekwa ya dị ka faịlụ
A na-eme nchịkọta nke data ndị ọbịa n'agbanyeghị ọnụnọ nke onye ndụmọdụ.Kọntaktị ga-abanye na CRM (AMO ma ọ bụ Megaplan) na ofufe na-enweghị òkè gị.
mwekota na-ewu ewu crm
Tinye ndị ahịa ọhụrụ na ọrụ na CRM na usoro mkparịta ụka
ihe niile dị mfe
Gị na ndị ọbịa kparịta n'efu na-enweghị oke ọrụ
Mkparịta ụka efu ruo mgbe ebighị ebi
Enweghị oke ọrụ, enweghị oke oge
Anyị dị mma karịa ndị asọmpi anyị
Mkparịta ụka na-arụ ọrụ efu
Ọrụ 27 n'efu
Ngwa njikwa ogo ọrụ 27
Anyị na-enye onyinye maka ndị enyi na-ezo aka
Site na 215 ₽ kwa ebe ọrụ onye ndụmọdụ kwa ọnwa
3 ọwa nzikọrịta ozi ọzọ
Nkata, ọdịyo, vidiyo, nlekota oru
Mwepu njikwa, nzikọrịta ozi ọdịyo/ vidiyo
Ụbọchị 19 nke uto ahịa, ọrụ 20
Mgbanwe na ịdị mfe nke ọrụ na ngwaọrụ
Ụzọ ọdịnalanke ndụmọdụ n'ịntanetị
Oku n'ịntanetị efusitere na ndị ọbịa
Mee ntụle vidiyo dị ndụna saịtị ahụ
Tụgharịa asụsụ onye ọbịa site naibe, gosiọdịnaya
Nyochaa ọrụ ndịọbịaozugbo
Mee ka ọ pụta ìhè na kọwapụtaihe ndị dị na ibe ndịọbịa
Callpy ga-enyere onyeọbịa ike gwụrụ aka ozugbo
Nhazi dị omimi nke ụdịwijetị nwere ihenjirimara ụlọ ọrụ
Chekwaa kọntaktị ndị ahịa na -akpaghị akana CRM
Nchịkọta kọntaktịnke ndị ọbịa saịtịsite na ụdị Callpy
Mepụta otu ndị ndụmọdụKesaa ndịọbịa na-eruba na ha
Soro nkata vidiyo Russia kacha ewu ewu maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ịkpakọrịta ma ọ bụ nwee ọmarịcha oge iji jikọọ ndị enyi ọhụrụ na ndị enyi ochie na netwọkụ. Kwa ụbọchị World Wide Web na-enweta ewu ewu ma na-enye ụzọ ọhụrụ na-atọ ụtọ iji kparịta ụka na ịntanetị site n'akụkụ ụwa niile, site n'enyemaka nke nkata vidiyo na ọrụ weebụ ndị ọzọ n'ụzọ dị mfe na nke ọma na-amata ndị na-adọrọ mmasị, ọ bụghị naanị maka nkwurịta okwu. Mkparịta ụka vidiyo izizi maka nzikọrịta ozi na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị webụ igwefoto chatroulette-worldwide.com nzikọrịta ozi gburugburu ụwa n'ịntanetị. Dị ka ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto (ụmụ nwanyị na ndị ikom) na-achọta ọkara ha site na mkparịta ụka vidiyo na nkata vidiyo na-ahapụghị ụlọ ahụ! Ihe ịga nke ọma nke akụ.
Ihe nzuzo nke ịga nke ọma chat-ruletka.net dị mfe, ekele maka akụkụ kamera weebụ ma e wezụga nkwurịta okwu na-enwe ike nyochaa ibe ha n'ihi na nke a dị mkpa iji nyochaa ọkara nke abụọ. Mkparịta ụka nwetara ọtụtụ ewu ewu n'ihi ohere nke ịchọta ndị enyi na usoro enweghị usoro ka esi egwu ọkpọ ọkpọ, ebe, wee nweta aha niile nke roulette nkata. Ndụmọdụ na aghụghọ Dị ka ezi obi n'ime onwe ha n'ihi na mgbe gị na ndị enyi ọhụrụ na-akparịta ụka na ndụ n'ezie, onye ọ bụla gbara ajụjụ ọnụ chọrọ ịhụ ndị mmadụ n'ezie kama ịbụ ndị akụkọ ifo na nkata vidiyo. Na-ekwurịta okwu, chọta ndị enyi, ndị enyi ochie, gbalịa ka gị na onye ahụ nwee mkparịta ụka na ọnọdụ dị mma, zere okwu rụrụ arụ, mee ka mkparịta ụka ahụ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị ma na-atọ ụtọ - bụ isi ihe na-eme ka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-aga nke ọma! Mee ekele, nye onyinye! dị ka ọ dị na ndụ n'ezie,Enyere onyinye iji ghọta onye na-akpọ oku na nlebara anya raara onwe ya nye ma pụta ìhè megide gị n'etiti ndị enyi na ndị enyi. Iwu nkata vidiyo Russia coomeet memeet na-enye nkata ọrụ n'ụzọ dị mma. Mkparịta ụka nkata na-abụkarị ndị ọrụ na-asụ Russian.
Amachibidoro nke ọma na ọ bụghị ụkpụrụ omume, ọ bụghị nkwupụta nyocha n'ụdị ọ bụla.Mkparịta ụka ahụ na isiokwu nke mmekọahụ na ụmụaka ruo afọ 18.Amachibidoro igosi akụkụ nzuzo nke ekpughere n'ike.nchekwa Maka nkata vidiyo nchekwa na-ebelata ọnụ ọgụgụ ndị na-adịghị mma Mkpebi na ndebanye aha dị mfe nke na-agaghị esiri ike mana ọ ga-enyere aka nzacha nkata ma gbochie ndị na-abanye.
Saịtị nkata kacha mma dị ka omegle na 2022 - Nkata Nhọrọ maka Nkata vidiyo efu.
Anyị na-eji ịntanetị eme ọtụtụ ọrụ dị iche iche, mana otu n'ime isi ihe kpatara ya bụ ịdị na-elekọta mmadụ.Mkpa mmekọrịta bụ ọnọdụ mmadụ nke na-eweta nkasi obi na afọ ojuju nye ọtụtụ ndị nkịtị.Ya mere Facebook ji ewu ewu.
Mana enwere ọtụtụ saịtị ndị ọzọ ndị mmadụ nwere ike izute.A na-akpọ ọtụtụ n'ime ihe ndị a forums ma ọ bụ bọọdụ ozi ebe ndị mmadụ biputere nkọwa wee bịaghachi ma emechaa hụ ma onye ọ bụla zara ya.Agbanyeghị, enwere ọtụtụ saịtị na-eme ka ikekọrịta oge dị nso na mkparịta ụka nkeonwe dịka ị nwere ike jikọọ na ịntanetị.
Otu n'ime saịtị kachasị ewu ewu bụ Omegle, ebe ndị otu na-emekọrịta ihe site na vidiyo, ọdịyo, ma ọ bụ naanị ederede.Ọ bụ nnukwu ebe ị ga-ezute ndị mmadụ na-enweghị usoro wee malite mkparịta ụka gị na onye ọbịbịa zuru oke.Ma dị ka ọtụtụ isi saịtị, Omegle aghọwo overpopulated.
N'okpuru ebe ị ga-ahụ ụfọdụ ndụ chat ụlọ dị ka Omegle ebe ị nwere ike jikọọ ọhụrụ enyi.
1. Chatliv:Chatliv - The ngwa ngwa na kasị adaba ụzọ mee ka a webcam nkata na onye ọbịbịa si n'ebe ọ bụla n'ụwa.Ihe niile ị ga - eme bụ ịbanye na okike nke onye ahụ, nke ọrụ ahụ ga - ahọrọ onye ọbịbịa kacha dabara adaba nke chọkwara izute onye dị ka gị.
Chatliv bụ saịtị nkata vidiyo kacha mma yana otu saịtị nkata vidiyo na-ewu ewu.Ọtụtụ puku ndị na-akparịta ụka n'ịntanetị mgbe niile site n'akụkụ ụwa niile na ụlọ nkata ịntanetị.
2. CooMeet:Coomeet bụ nkata vidiyo na saịtị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị (roulette).otu n'ime ndị kasị mma nhọrọ maka chatroulette na omegle, na coomeet ị nwere ike na-amalite video mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọbịa si n'ụwa nile.Coomeet na-arụ ọrụ na ụkpụrụ roulette, nke pụtara na ị maghị onye ị ga-akparịta ụka.ọ bụrụ na ị na-agwụ ike, ụdị nkata ndị a nwere ike iwetara gị obi ụtọ.
Akụkụ nke Coomeet:1. Gị na onye ọ na-amabughị na-akpakọrịta mgbe niile2. Mkparịta ụka vidiyo efu3. Tinye ndị mba ọzọ na listi enyi gị4. Soro onye ị na-amabughị gị na-akpakọrịta5. Ziga onye ị hụrụ n'anya onyinye na rose6. Chọta ezigbo enyi
3. TinyChat:Taa, TinyChat bụ ọrụ olu na nkata vidiyo kachasị na ịntanetị.Ụlọ ọrụ ahụ na-etu ọnụ na ndị ọrụ na-emepụta 5 nde nkeji oge ikuku kwa ụbọchị.N'ebe ahụ, ị ​​ga-ahụ ọtụtụ puku nkata, ọbụna ụfọdụ n'ime ha bụ ndị bi n'ógbè gị malitere, ma ọ bụrụ na ịchọtaghị isiokwu ịchọrọ, ị nwere ike ịmepụta nke gị.
TinyChat na-enye ohere iyi iyi vidiyo 12 n'otu ọnụ ụlọ ma na-eji API ebe ndị ọrụ nwere ike ibunye vidiyo dị ndụ site na ihe ngosi ndị akwadoro na ọrụ ahụ na ọ baghị uru.Ndị mmadụ na-agbakọta ọnụ iji igwe okwu, vidiyo ma ọ bụ ozi ngwa ngwa na-ekwurịta okwu.
4. Omegle Webcam:Omegle Webcam bụ ndị kasị ewu ewu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-akparị ụka webcam. Ihe karịrị ndị ọrụ 20.000.000 edebanyere aha. Mkparịta ụka roulette n'efu. saịtị dị ka omegle.Omegle Webcam bụ free ọzọ ka Omegle random video nkata, amaghị aha na-agwa ndị bịara abịa na-eji webcam na izute ọhụrụ ndị mmadụ ozugbo. Gị na ndị ọrụ na-akpakọrịta vidiyo, mee enyi ọhụrụ. Nwee mmekọrịta mmekọrịta na ndị hụrụ omegle.Omegle.webcam bụ ụdị saịtị chatroulette.
5. Bazoocam:Bazoocam bụ ebe ọzọ na-akparịta ụka n'igwe na-adịghị ahụkebe nke a na-agbadata nke ukwuu iji dobe ya ọcha.Dịka ụfọdụ saịtị ndị ọzọ a kpọtụrụ aha, ị rutere na mberede na nke onye ọzọ.Ọ bụrụ na ihe ị na-ahụ adịghị amasị gị, mgbe ahụ, pịa bọtịnụ "skip" wee gaa na onye ọzọ.
Bazoocam na-enye ọtụtụ egwuregwu ọtụtụ ndị ị nwere ike isonyere dị ka ndị na-agbaji ice ma ọ bụ ọ bụrụ na ike gwụ gị ikwu banyere onwe gị.Ọ bụrụ na ị na-agwụ ike, ha na-enye gị ime ihe na-adịghị mma, ma dọọ gị aka ná ntị banyere idebe uwe gị.Gbalịa iyi uwe ma ọ bụ kpọọ egwu ọkacha mmasị gị.Heck, kpọọ guitar ma ọ bụ kazoo, ị ga-ahụkwa ọtụtụ ndị ị ga-agwa okwu.
6. FaceFlow:FaceFlow - Ndị a na-eme ka mgbasa ozi ọha na eze gaa n'ọkwa ọzọ site n'ikwe ka ndị ọrụ nwee mkparịta ụka vidiyo nke nwere ike ịnweta mmadụ atọ n'otu oge.FaceFlow na-enye "ndị enyi gị na mkparịta ụka vidiyo na mkparịta ụka vidiyo efu, na ihe nchọgharị weebụ gị," mana ị nwekwara ike ịgwa ndị ị na-amabughị.Ndị ọrụ nwere ike mepụta profaịlụ enwere ike ịchọ ugbu a wee kesaa foto na vidiyo ọkacha mmasị ha na YouTube.
Ewezuga ịbụ naanị ọrụ nkata webụ ọzọ, saịtị a dabara na nnukwu ọrụ Skype ga-enye.Ọ na-enye ederede na nkata vidiyo otu oge.Na ime ka ihe bụrụ ihe na-atọ ụtọ karị, FaceFlow wepụtara egwuregwu ọtụtụ egwuregwu akpọrọ Flappy nke na-adị ezigbo ike.
7. ChatRandom:Chatrandom nwere ụfọdụ nnukwu ebumnuche, otu n'ime ha bụ ịghọ otu aha dị ka Facebook, Twitter ma ọ bụ YouTube.Nke a bụ saịtị kamera weebụ ọzọ na-ejikọ onye ọrụ na onye ọrụ ọzọ enweghị usoro.Ọ pụtara dị ka ihe ọzọ na Chatroulette n'ihi na saịtị na-agbanwe ọtụtụ oge iwu.
Iji mezuo ebumnuche a, ha na-akpọkọta ndị si n'akụkụ ụwa niile ma na-agbakwunye mba na asụsụ ọhụrụ mgbe niile.Ị nwere ike ịhọrọ ka gị na onye ọzọ na-akpakọrịta, gị na otu ma ọ bụ ụmụ agbọghọ.Ị nwekwara ike họrọ mmasị maka ikwu okwu site na vidiyo, yana ndị ọrụ mmekọ nwoke na nwanyị, ma ọ bụ n'asụsụ a kapịrị ọnụ.Ha na-agbakwunyekwa kamera weebụ na ọrụ ndị ọzọ iji zute atụmanya ndị ọrụ.
8. Chatroulette:Chatroulette bụ ọrụ nkata nwere kamera weebụ nke nwere ụzọ pụrụ iche iji jikọọ ndị ọrụ na ndị ọbịbịa na-enweghị usoro.Ọ ga-adị ka igwu egwu roulette Russia, naanị kama iji égbè agbagbu, ị na-ekwu okwu site na ozi ederede na / ma ọ bụ kamera webụ, ma ọ bụrụ na ị kwuo ma ọ bụ mee ihe na-amasịghị onye gị na ya na-akpakọrịta, ha na-ahapụ nkata ahụ ("egbu"). mkparịta ụka).
Emebere ya na 2022 site n'aka nwata dị afọ 17 nke wetara saịtị ahụ site na ime ụlọ ya gaa n'ụlọ nne na nna ya.Ọbụlagodi na enweghị mgbasa ozi, saịtị a tolitere n'ogo buru ibu site n'okwu ọnụ.Mgbe ọtụtụ afọ nke nnwale na njehie gasịrị, o mechara ruo n'ókè ọ nwere ike wepụ àgwà na-ekwesịghị ekwesị n'ụzọ dị irè.
Ndị ọrụ ga-edebanye aha ma kwenye na usoro ọrụ, ndị nhazi saịtị ga-enyocha ndị mebiri emebi. Ọtụtụ ndị ọrụ nọ n'okpuru afọ 30 ma enwere ọtụtụ ndị nwoke karịa ụmụ nwanyị. Opekempe, ọ ruru R.
Iwu maka izute ndị ọbịa n'ịntanetị1. Emela ma ọ bụ kwuo ihe ọ bụla ị nwere ike ime mkpesa banyere ya ma emechaa. Enwere ike ịdekọ nkata gị, ederede, ọdịyo ma ọ bụ vidiyo gị n'ụzọ dị mfe ma jiri mee ihe megide gị.2. Ọ bụrụ na a na-akparị gị, kọsa ya wee debanye aha onye ọrụ.Mee otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na ị hụ ka a na-akpagbu mmadụ.3. Ejila onye ọ bụla kerịta ozi nkeonwe.4. Ndị aghụghọ ọkachamara ga-akpaghasị ozi maka ozi gị.5. Ahapụla ihe ọ bụla nkeonwe na vidiyo nkata, dị ka foto ezinụlọ ma ọ bụ nkọwa ọ bụla ọzọ nke onye bi na ya nwere ike iji soro.6. Kụziere ezinụlọ gị ka ị ga-esi nọrọ na nchekwa mgbe ị na-eji nke ọ bụla n'ime ọrụ ndị a.Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ha bụ ndị a na-emezigharị nke ọma, a ka nwere ụfọdụ anụ ndị nwere ọgụgụ isi n'ebe ahụ.7. Nwee anụrị... nke ahụ bụ ihe ọ bụ.